Ithetha ntoni i-SELV ngokuhambisa umbane?
I-SELV imele uKhuseleko olongezelelekileyo lweVoltage. Ezinye iincwadana zokufakelwa kwamandla kwe-AC-DC zinezilumkiso malunga ne-SELV. Umzekelo, kunokubakho isilumkiso malunga nokudibanisa iziphumo ezimbini kuthotho kuba amandla ombane aphezulu anokugqitha kwi-SELV ekhuselekileyo ...
Ngaba unayo i-Ultrathin LED Driver?
Ewe sinonikezelo lwamandla ombane akhokelayo afanelekileyo kwisibuko esikhanyisiweyo, ukukhanya okukhokelwayo, isibuko esikrelekrele kunye nokukhanyisa ikhabhinethi. Umbane oqhubekayo wombane we-ultrathin yi-12V / 24V DC, ukhetho lwamandla ombane we-90-130V / 170-264V AC. Isiphumo samandla ombane 24 ...
Ngaba kuqhelekile ukuba iqondo lobushushu kumphezulu lomqhubi okhokelwe liphezulu kakhulu?
Abathengi bethu abambalwa badidekile ukuba iqondo lobushushu kumphezulu lomqhubi okhokelwe liphezulu kakhulu. Ngaba kungenxa yomgangatho ombi? Uninzi lwabantu luya kucinga njalo, kodwa ayinyani. Ukuhambisa ubushushu, umqhubi wethu okhokelwayo uya kuba ...
Kutheni ukukhanya kwam kwezibane ze-LED?
Akukho nto yenza ukuba indawo isuke kubukhazikhazi iye kwi-squalor ngokukhawuleza kunebhalbhu ebengezelayo. Yenye yezo zinto ofuna ukuyilungisa kwangoko, ke nantsi indawo ekhawulezileyo yezizathu zokuba kutheni i-LED yakho ingasebenzi kakuhle. Kuyanceda ukwazi ukuba imisebenzi ye-LED njenge-com ...
Iyintoni intsingiselo yomqhubi we-ul class 2 okhokelwayo?
I-UL Class 2 ekhokele umqhubi ihambelana ne-UL1310 esemgangathweni, oko kuthetha ukuba imveliso ithathwa njengekhuselekileyo ekunxibelelaneni kwaye akukho khuseleko lukhulu luyafuneka kwinqanaba le-LED / ukukhanya. Akukho bungozi bomlilo okanye ukothuka ngombane. ...
Ungayisombulula njani ingxaki malunga nokunikezelwa kwamandla okungangeni manzi?
Ukunikezelwa kwamandla kuneparameter: ukulinganiswa kwe-IP, oko kukuthi, ukungabi nothuli kunye nokulinganisa okungangeni manzi. Sebenzisa i-IP ngamanani amabini ukubonisa, inani lokuqala libonisa inqanaba lokukhuseleka kwesixhobo esiqinileyo, kwaye inani lesibini libonisa inqanaba lokukhusela ulwelo lwezixhobo ...
Wamkelekile ukuba Dibana nathi kwi-Guangzhou International Izibane Exhibition
Siyavuya ukuninika wena isimemo sokufudukela kumnquba wethu kwi-Guangzhou International Exhibition Exhibition, ngomhla we-9 ukuya kwele-12 kuJuni. Oku kulandelayo kuya kwenziwa: * Uluhlu olupheleleyo lweemodeli zethu ezingangeni manzi, ezifanelekileyo ngaphakathi nangaphandle * ENTSHA isungule i-ultra thin led ...
Yintoni egqiba ukuba ubonelelo lombane kufuneka lubekwe phi?
Ubume bendalo bumisela iintlobo ezahlukeneyo zamandla ombane we-LED afanelekileyo kwiimfuno zemo engqongileyo. Umzekelo, ukuba ufaka amanzi angangeni manzi e-strip e-LED ngaphandle okanye kwiindawo ezimanzi okanye ezifumileyo, kuya kufuneka uthathe umbane wamanzi we-LED ongenawo amanzi w ...
Kutheni unikezelo lwamandla olukhokelwayo lusilela ukusebenza?
Njengecandelo eliphambili kwizibane ze-LED, umgangatho womqhubi we-LED uchaphazela ngokuthembekileyo kunye nokuzinza kokubanzi. Ngokusekwe kumqhubi we-LED kunye nezinye iitekhnoloji ezinxulumene noko kunye namava esicelo somthengi, sihlalutya ukusilela koyilo lwesibane kunye nokusetyenziswa ...
Amandla okuphuma (W) Eli xabiso linikwe ii-watts (W). Sebenzisa umqhubi we-LED ubuncinci ixabiso elilinganayo nee-LED zakho. Umqhubi kufuneka abe namandla okuphuma aphezulu kunokuba ii-LED zakho zifuna ukhuseleko olongezelelekileyo. Ukuba imveliso ilingana neemfuno zamandla e-LED, iyasebenza ...
Ukuqhubeka kweVS rhoqo kweVoltage
Bonke abaqhubi bahlala bekhoyo ngoku (CC) okanye i-voltage engapheliyo (i-CV), okanye zombini. Le yenye yezinto zokuqala ekufuneka uziqwalasele kwinkqubo yakho yokwenza izigqibo. Esi sigqibo siya kugqitywa yi-LED okanye imodyuli oya kuba uyigunyazisa, ulwazi ...
Ukuxhathisa kwamanzi / uthuli ngaba umqhubi wakho we-LED kufuneka abe njani?
Ukuxhathisa kwamanzi / uthuli ngaba umqhubi wakho we-LED kufuneka abe njani? Ukuba umqhubi wakho uya kwenye indawo apho anokuhlangana khona namanzi / uthuli, ungasebenzisa umqhubi olinganisiweyo we-IP65. Oku kuthetha ukuba ikhuselwe eluthulini kunye nawo nawaphi na amanzi aqikelelwe kuyo. ...